DhUFE# Oromo Protests – Welcome to bilisummaa
DhUFE# Oromo Protests
Sagalee Ibistuu Dukkanaa
Mootummaan Wayyaanee mormii barattootaa dhamsuuf koree armaan gadii dhaabee jira.koree kana keessaatti namni hundii maqaa abbaa wajjiin barreefamee jira.tokka malee sunis Koloneel Tasfaayee jechuun maqaan keennameefi ajjeechaa barattoota gubarraa ajaja keenna jira!
Waraana Wayyaanee AMBOO fi bakka adda addaatti barattoota fiixe fi fiixa jiruuf koreen run itti gaafatamtoota.
Namoonni ummaata armaan gadiitti maqaan isaani tarreefame kana kan beektan lakkoofsa Moobaayla isaani.kan mana Phootoo isaani.maqaa isaani guutuu fi seenaa isaani qorachuun dirree baasne saaxiluuf qophii tahuu qabna! Ummaata Wayyaaneef har’a bitamanii ummaata isaani fiixa waan jiraniif nuti hundii keenya kana hubannee isaan saaxiluun seenaa haa galmeesinuu.
Akkasumallee kaabineenee naannoo keessanitti ummaata ajjeesuuf sochii godha jiran kanneen biroos saaxilaa.
Sagaleen ibsituu dukkanaa siin nuuf barreesitan maqaa keessan osoo hin ibsine hawaasa biraan geenyeni jirra!
1) Muktar kadir
2) Nuree Qamar
3) zalalem Jamane
4) Co, Tasfaye
5) Addisu Badhaasaa
6) Fiqaduu Saboqa
7) Ibrahim Hajii
8) Raabiyaa Lisaa
9) Obboo Jamaal Abbaasoo
SHare gochuun namoonni hundinuu duula ajjeestoota barattoota ykn ilmaan Orommoo irratti rawaachaatin jiran haa saaxiluu!
Previous VOA: Hiriirri Mormii Barattoota Oromoo fi Uummataa Itti fufe
Next Ergaa koo warra TV Oromiyaa ofiin jedhu kan biyya jiraniif